Indlu entsha yamaplanga ngasechibini yeSasek Wielki - I-Airbnb
Indlu entsha yamaplanga ngasechibini yeSasek Wielki
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEmil
Indlu yamaplanga entle enolwandle lwabucala, i-jetty, isikhephe esinamaza kunye neendawo ezintle zechibi nemithi ejikelezileyo. Igqitywe ngomgangatho ophezulu, amagumbi okuhlambela ayi-2, amagumbi okulala ayi-4, igumbi lokuhlala elinendawo yokubasa umlilo, ikhitshi elinento yonke kunye neethayile ezinkulu, zonke zenziwe zanethezeka kwaye zaneliseke ziindwendwe zethu. Kwindawo ebiyelweyo ejikeleze indlu, ngaphandle kwendawo yomlilo eneebhentshi ezenziwe ngezandla neebhedi ekuthiwa zii-hammock ezitofotofo, ungafumana indawo eninzi eluhlaza eyenza zonke iintlobo zokuzonwabisa nentsapho ziphole.
Umphantsi wendlu yethu uquka iveranda yangaphambili, igumbi lokuhlala elinekhitshi elivulekileyo, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala. Igumbi lokuhlala line-fireplace yombane, i-TV, ikona etofotofo nenendawo entle yokubuka ichibi, itafile yekofu ye-okhi kunye nesibane esishushu phantsi. Kwigumbi lokulala uza kufumana iibhedi ezimbini ezilala umntu omnye (onokuzijoyina zibe yibhedi enye elala abantu ababini), itafile yokunxiba, isitulo, ikhabhathi enee-drawer nesibane esisecaleni kwebhedi. Kwigumbi lokuhlambela elisezantsi sinendlu yamaplanga yeshawa etofotofo, ithobhi, ikhabhathi enee-drawer nesinki, ibhaskithi yokuhlamba impahla nesipili. Ekhitshini ngaphandle kwezixhobo ezisisiseko ezifana nezi: izinto zokuhombisa, iimela neebhodi zokusika, iipleyiti, iikomityi, iiglasi, izitya zokupheka nokufraya, njl. kukho ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, i-induction hob, ioveni, i-microwave, iketile yombane, i-toaster, umatshini wokwenza ikofu kunye netafile yokutyela enezitulo eziyi-8. Ngokuthe ngqo kwigumbi lokuhlala sinokuya kwindawo esezantsi apho, ngaphandle kwendawo entle, siza kufumana itafile enkulu yeglasi enezitulo eziyi-6 zeglasi kunye neebhedi eziyi-2 ezitofotofo.
Kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokuhlambela lesibini kunye namagumbi okulala amathathu ahlukeneyo, amabini awo akwaziyo ukufikelela kwibhalkoni ephezulu kunye nezitulo ezimbini kunye nendawo entle yokubuka ichibi kunye nendawo eluhlaza. Igumbi lokuqala linebhedi elala abantu ababini (enokwahlulwa ibe ziibhedi ezimbini ezilala umntu omnye), idresa enee-drawer, into yokuxhoma iimpahla nebhalkhoni. Igumbi lesibini elinezixhobo kunye nendawo lifana negumbi lokulala lokuqala. Igumbi lesithathu linebhedi elala abantu ababini (linokuhlulwa libe ziibhedi ezimbini ezilala umntu omnye), iitafile ezimbini ezisecaleni kwebhedi, izibane eziyi-2 ezisecaleni kwebhedi, idresa enee-drawer, into yokuxhoma iimpahla, isibane esiphantsi, itafile yekofu nesitulo esitofotofo. Kwigumbi lokuhlambela elingasentla iindwendwe zethu ziza kufumana ibhafu, ithobhi, ikhabhathi enee-drawer nesinki.
Ukongezelela, kukho ulwandle lwabucala, i-jetty yabucala, ii-hammock ezimbini, izitulo ezintathu eziphathekayo, i-grill ephathekayo, isikhephe esineenqwelo zombane kunye neepleyiti ezimbini, iintonga ezintathu zokuloba (ezikwinguqulelo enkulu), indawo yomlilo eneebhentshi ezenziwe ngezandla, indawo yokupaka.
Indlu ifakwe iayini, umatshini wokomisa iinwele, umatshini wokutshayela, umatshini wokuhlamba impahla, izinto zebhedi ezicocekileyo
Indlu yethu iselunxwemeni lwamaplanga lwechibi elikhulu nelihle iSasek Wielki, eyenye yezona ndawo zinkulu zokugcina amanzi kule nxalenye yaseMasuria enamahektare angaphezu kwe-870, indawo evulekileyo engaphezu kweekhilomitha eziyi-2,5 nobude obufikelela kwiikhilomitha eziyi-12.5. Kwindawo ekufutshane nathi kukho iindawo ezintle ezinemizila emininzi, amadlelo namahlathi. Le nto yenza abantu abafuna ukuphumla baze baphumle kude nezixeko ezinengxolo nezixineneyo.
Phakathi kweendawo esikufaneleyo ukuzikhankanya kwingingqi yethu esinazo: ifama yasefama "Masurian Ranch" (malunga neekhilomitha eziyi-1) apho uza kufumana iivenkile zokuthenga ukutya kunye neevenkile zemizi-mveliso, indawo yokutyela isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa, igadi yebhiya; ilali yaseD-wierzuty (malunga neekhilomitha eziyi-6/imizuzu eyi-5 xa uqhuba) apho uza kufumana iivenkile zokuthenga ukutya, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, iivenkile zeemveliso, isikhululo segesi; idolophu yaseSzczytno (malunga neekhilomitha eziyi-15/imizuzu eyi-15 xa uqhuba) apho uza kufumana iivenkile ezithengisa izinto eziphambili, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokuloba, iivenkile zokuloba, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zeempahla, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zeempahla, iivenkile zokutyela, iivenkile zeempahla, iivenkile zokutyela zasebusuku, iiklabhu zasebusuku, iimyuziyam, iivenkile zegesi kunye nezinye iindawo ezinomtsalane; idolophu yaseBiskupiec (malunga neekhilomitha eziyi-27) apho uza kufumana khona iivenkile zokutya, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zeempahla, iivenkile zokutyela, iivenkile zeempahla, iivenkile zokutyela zasebusuku, iivenkile zokutyela, iivenkile zegesi kunye nezinye iindawo ezinomtsalane; idolophu yaseBiskupiec (malunga neekhilomitha eziyi-27) apho uza kufumana khona iivenkile zokutya, iivenkile zokutyela, iivenkile zokutyela, iivenkile zeempahla, iivenkile zeempahla, iivenkile zokutyela zasebusuku, iivenkile zokutyela, iivenkile zegesi kunye nezinye iindawo ezinomtsalane
Umbuki zindwendwe ngu- Emil
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dąbrowa